Imethi kunye nebhloko yecork iyathengiswa Fitness + | Ndisuka mac
Imethi kunye nebhloko yecork iyathengiswa Fitness +
I-Apple inekhathalogu yayo yemveliso izixhobo ezininzi zazo zonke iintlobo kunye nokufika kweApple Fitness + yongeze isibini iimethi kunye nebloko yokhokho weeseshoni zeYoga. Kule meko, akukho mfuneko yokuba umsebenzisi athenge ezi mveliso kwivenkile yeApple, kodwa sinomdla wokubona olu hlobo lwemveliso evenkileni. Ewe ayisiyiyo imveliso yokuqala enxulumene nemidlalo esiyibonayo kwiivenkile zenkampani yeCupertino, kodwa kuyinyani ukuba asikaze siyibone imethi okanye isixhobo esisebenzayo seengcali zeyoga ngaphambili.
Ifumaneka kuphela e-US
Ezi mveliso ziye zafumaneka kwiwebhusayithi ye-Apple ixesha elide kwaye ngoku zifumana ukubonwa okubalindeleyo kulindelwe ngokusesikweni inkonzo ye-Apple Fitness + namhlanje. Kule meko, ziimveliso ezenziwe ngezinto ezisetyenzisiweyo kunye nokunikezela, ngokwenkcazo nganye, ukuxhathisa okuphezulu ukunxiba. Ezi ziimveliso ezintathu iApple enazo kwiwebhu:
Ibhloko ye-yoga cork: IRandi ye19,95
Umatshini we-eKOlite: IRandi ye77,95
Ukusebenza kweMat 6mm: IRandi ye119,95
Uhlobo lwayo nguManduka kwaye ayizizo izixhobo ezingabizi kakhulu kodwa zomelele kwezemidlalo. Sihlala sisithi singathanda ukuba iApple isungule le nkonzo ye-Apple Fitness + ngaphaya kwe-US kunye ngakumbi ngoku ukuba bayifaka kwisicwangciso esinye, kodwa okwangoku azikho iindaba malunga noku kuyakufuneka silinde ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Imethi kunye nebhloko yecork iyathengiswa Fitness +
Itshaja ezindala zika-Apple ezingama-29W azihambelani neMagSafe Duo
UTim Cook uzibophelele kuqoqosho lwekhabhoni olungathathi hlangothi